DFS oo qabatay shabakad ka shaqeynaysay Socdaal Sharci daro ah | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta DFS oo qabatay shabakad ka shaqeynaysay Socdaal Sharci daro ah
DFS oo qabatay shabakad ka shaqeynaysay Socdaal Sharci daro ah
Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in ay qabteen Shabakado isku xiran oo ka shaqeyn jiray Arrimo la xiriira socdaalka sharci darrada ah.
Agaasime koonfi ayaa sheegay in sanadkii tegay ee 2020 ay diiwaan-geliyeen 479 kiis oo socdaal sharci darro ah oo la doonayay in si qarsoodi ah dad dalka Soomaaliya looga dhoofiyo, hayeeshee laga hortegay.
Hay’addaha dembi baarista ayuu Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda tilmaamay in loo gudbiyay dadkii loo qabtay kiisaskaas, kuwaasi oo uu xusay in qaarkood xukuno lagu riday, halka kuwo kalena sharciga la marsiiyay oo la ganaaxay.AKHRISO
“Waxaa jira Shabakado isku xernaa oo ka shaqeynjiray arrimahaan, markii aan la kaashanay wadamo naga baxsan iyo Hey’adaheena ammniga waxaa suuragashay in laso xiro” ayuu yiri Agaasime Koofi.
Hadalkaan ayuu Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ka sheegay khudbad uu ka jeediyay Shirweynaha Wadatashiga qiimeynta qataraha lacag dhaqidda oo shalay ka furmay Magaalada Muqdisho.
Maqaal horeJoe Biden iyo Boris Johnson oo wadahadal yeeshay
Maqaal XigaHawlgalo dad lagu qabtay oo ka dhacay Gaalkacyo